VISA KU USA USA PASHURE pa 12.04.2021
nemunyori: Maxim Chernyshkov Kubvumbi 30, 2021
Vatungamiri veUnited States muRussia vakamira kubvuma zvikumbiro zvekupa mavisa kuAmerica kubva May 12, 2021. MaRussia ese akamhanyira kunotora manotsi kuUS Consulates muKazakhstan nedzimwe nyika - asi hapana nzvimbo uye mamiriro ari kuramba achiipisisa neyechipiri!
Ungawana sei vhiza yekuUS?
Iko kunogamuchirwa iko zvino kunogamuchirwa?
Panguva ino kupihwa mavhiza ekuUS inogadzirwa chero paine embassy yenyika yakapihwa. Asi izvi zvinongoshanda kune avo vanopfuura vasina kubvunzurudzwa. Kuburitswa kwemavisa eUS zvinogoneka zvichienderana nemamiriro ezvinhu anotevera:
Hazvifanirwe kunge zvichidarika mwedzi gumi nerimwe kubva nguva yekupedzisira vhiza yapera;
Iye mugari anotambidza anodhindisa munzvimbo imwe chete yaanoda tora vhiza yekuAmerica;
Kuvandudzwa munyika imwecheteyo iyo yaakatambirwa.
Kana izvi zvisiri zvako, saka mhinduro kumubvunzo: "Ungawana sei vhiza yekuUS?"Inononoka zvishoma. Iwe unozofanirwa kuwana kubvunzurudzwa. Ivo havasi kuchengetwa muRussia izvozvi, saka iwe uchafanirwa kubhururuka uchienda kune iyo nyika iyo yavakabatwa. Panguva imwecheteyo, nyika pachadzo dzinoburitsa manhamba ari padyo maunogona kuenda kubvunzurudzo.
Maitiro ekunyorera kwevashanyi vhiza kuUnited States?
Uye heino runyorwa rwezvakakodzera magwaro anodiwa kuti tora vhiza yekuAmerica, yakaramba yakadaro. Unoda:
Kunyorera vhiza yekushanya kuAmerica;
Pasipoti yekune dzimwe nyika inopera kanokwana mwedzi mitanhatu kubva musi wekunyorera;
Mufananidzo uri kuyera mashanu ne5 masendimita.
Kunyangwe iwe uchifunga maitiro ekunyorera vhiza yekushanya kuUnited States, ipapo iwe zvirinani ufunge nezve izvo iwe zvauchatora newe kubvunzurudzo yako ipapo ipapo. Sezvo zvese zvataurwa pane zvirinani kusimbisa nerubatsiro rwemapepa. Izvi zvinowedzera mukana wemhedzisiro yakanaka.
Izvo zvaunoda kupa kana iwe uri kuenda kunorapwa
Uye dzimwe nguva haufanire kufunga nezvazvo maitiro ekugadzira vhiza kuenda kuUSA. Kana iwe ukauya kuzogamuchira kurapwa kwakanaka, saka iwe unongoda kupa magwaro. Pakati pavo:
Tsamba yakabva kuna chiremba ine tsananguro yakadzama yechirwere uye zvikonzero nei kurapwa kuchifanira kuitirwa muUnited States;
Tsamba kubva kuna chero chiremba wekuAmerica maanoratidza kuda kwake kukurapa. Munzvimbo imwe chete, achafanirwa kuratidza mutengo, uyo unosanganisira mutengo wemishonga, pamwe neyakaenzana huchi. vashandi.
Chirevo chemutoro wezvemari kubva kune vanhu kana masangano epamutemo anozotakura zvese mutengo wekufambisa uye kurapwa. Iwe zvakare unofanirwa kupa zvirevo zvebhangi uye mamwe mapepa anosimbisa kuwanikwa kwemari.
Maitiro ekufamba kunze kwenyika panguva yedenda
Ungawana sei vhiza yeAmerica, kana usingabvumidzwe kupinda munyika? Mushure mezvose, denda rinonyanya kutadzisa kufamba. Kazhinji, kurwara, chikoro uye kubatana kwemhuri zvinosanganisirwa mune runyorwa rwezvikonzero zvakanaka.
Asi kusangana nemumiriri we kuwana vhiza yekushanya kuAmerica inonziwo inoremekedza. Asi pane izvi unofanirwa kuve neSchengen visa. Ikozvino inogona kuwanikwa kubva kuGreek Consulate. Chokwadi, vanogona kuramba zvakachengeteka kuburitsa Schengen. Ipapo visa kuAmerica yevaRussia chichava chinhu chisingagoneki. Kana pasina mvumo yekugara munyika yeEuropean kana wechipiri ugari.
Seimwe Sarudzo Yeimwe yevanamuzvinabhizimusi uye vezvemabhizimusi - kukurumidza kunyorera kuve mugari wechipiri weimwe yeCaribbean nyika dzinopa ugari nekudyara:
Uku kuva mugari wenyika kunoita kuti zvikwanisike kuwana vhiza-gore gumi kuenda kuAmerica uye kukanganwa matambudziko ese!
Kana kungova-gore -gumi vhiza kuenda kuUnited States hakuna kukwana kwauri, pane mukana wekuwana E-10 Investor visa, nekuda kweizvi unofanirwa kuterera chirongwa chechipiri chekuva mugari kuGrenada - ichi ndicho chete chirongwa izvo zvinokutendera iwe kuti uwane vhiza yechikamu ichi muAmerica.
Kuva mugari wechipiri kuchakubatsira sei kuenda kuAmerica?
Kuva mugari wechipiri kunovhura musuwo wekuwana mavhiza muAmerica kuvaRussia. Nokusingaperi, vagari venyika yedu vanogona kudhirowa magwaro kwenguva yemakore matatu. Mushure meizvozvo, iwe uchafanirwa kugadzirisa vhiza yekushanya kuAmerica.
Asi kana iwe netsaona wakafukidza ugari hweimwe yenyika shanu dzeCaribbean, unogona kunyorera kuwana vhiza yevashanyi kuUnited States kwenguva gumi. Zvakare kune varimi, ugari hweGrenada richava rubatsiro rwakanaka. Ino vimbisa E-10 vhiza kwenguva yemakore mashanu.
↑ Visa yeUS ↑ visa kuAmerica ↑ visa kuUSA 12.04.2021 ↑ visa kuAmerica 12.04.2021/XNUMX/XNUMX ↑ sei kuwana vhiza kuUSA ↑ sei kuwana vhiza kuAmerica ↑ imwe nzira yekutora vhiza kuenda kuUSA ↑ imwe nzira yekuwana vhiza kuAmerica ↑ USA kuwana vhiza ↑